Nagu saabsan - Tangshan Jidong makaanikada iyo qalabka korontada Co., Ltd.
Tangshan Jidong makaanik iyo qalabka korontada Co., Ltd.
Ganacsiga Muhiimka ah ：
Saddex xarumood oo ganacsi ：
1.e-ganacsiga adeegga madal
Ka ganacsiga khadka tooska ah ee wax soo saarka
Xalka 3.Custom ee alaabada xirfadeed, mashruuca dayactirka iyo adeegyada farsamada
4.Share inventories ka mid ah shirkadaha xubnaha ka ah.
xaruntu waxay bixisaa adeeg kormeer ah oo loogu talagalay qalabka si loo yareeyo cilladaha degdegga ah ee goobta, loona kordhiyo qalabka xasiloonida shaqeynaya
Sideeda ganacsi waxay kala yihiin:
Kooxda Farsamada Xirfadeed ：
1.qalabaynta nidaamka xariijinta wax soo saarka
2. kormeerka gariirka,
3. kormeer aan loo baahnayn,
4. baaritaanka saliida iyo falanqaynta
5. tijaabinta dejinta dejinta,
6. ogaanshaha heerkulka
7. kormeerka baabuurta
8. tijaabin firfircoon oo joogto ah ee foornada wareega.
1.Saddex falanqeeyeyaal ruxruxsan oo caalami ah oo shahaadooyin caalami ah haysta
2.Saddex Ⅱgrade injineerada NDT
3.32 koronto, makaanik, geedi socod, koronto dhalinta iyo injineerada madaniga ah
4.Xarunta dib-u-soo-saaridda qalabka - Dayactirka qalabka kala duwan ee mobilada iyo kombaresarada hawada.
5.Habgal, Kaydinta, Tababar.
6.Engineering xarun la-talin farsamo- In la qabto ganacsi qandaraas leh, waxaa la siinayaa keyd xog-dhoofineed iyo la-talin farsamo oo xirfad leh
shan mashruuc oo muhiim ah
1.Kiln dhululubo mashruuca isticmaalka kuleylka
Shirkadeenu waxay diirada saartay cilmibaarista suuqa waxayna dhameystirtay qaabeynta aruuriyaha kuleylka qulqulaya qolofta wareega si ay u bixiso koronto, kuleylka biyaha qubayska iyo kuleylka xilliga jiilaalka. Waxaan sameyn karnaa baaritaanka goobta iyo naqshadeynta iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha si ay u siiyaan macaamiil adeegyo shaqsiyeed iyo shaqsiyeed.
Gaar ahaan dhinaca jiilka korontada company Shirkadeena waxay aqbashaa tikniyoolajiyadda dhalinta korantada kuleylka ee kuleylka heer kulkiisu hooseeyo. Tiknoolajiyaddani waxay si toos ah u adeegsaneysaa kuleylka qashinka heerkulka hooseeya ee ka baxa godka bullaacadda iyo kolajka si loo soo saaro tamarta korantada. Ma jiro isticmaalka shidaalka iyo wasaqowga inta lagu jiro dhalinta korantada. Waa tikniyoolajiyad soosaara koronto cagaaran oo leh faa iidooyin dhaqaale, nadiif iyo cagaar, taas oo u hoggaansanta siyaasadda nadiifta iyo keydinta tamarta ee dowladda. Waxay leedahay meel horumarineed iyo rajo weyn.
1, Qaybta la qaboojiyey ee biyaha waxay isticmaashaa tikniyoolajiyadda uumiga flash-ka, taas oo yeelan karta adeegsiga sare ee kuleylka qashinka si si weyn kor ugu qaada faa'iidada dhaqaale ee matoor-qaadaha
2, Kuleeliyaha kuleylka AQC waa nooc toosan. Waxaa lagu qalabeeyaa pre-dususter ah (qolka dejinta) ka hor kuleeliyaha si loo yareeyo boodhka soo galaya kuleyliyaha.
3 iler kuleeliyaha PH waa nooc jiif ah, oo qaata kuleyliyaha kuleyliyaha kuleylka jeebka; Faa'iidada mid ayaa ah in la yareeyo boodhka kuleylka aagga kululaynta iyo faa'iidada kale ayaa ah in la yareeyo tirada qalabka wax lagu rito, iyo in la yareeyo dheecaanka hawada ee nidaamka.
4, Nidaamka xakamaynta ee la qaybiyey wuxuu qaadanayaa qalabka iyo softiweerka nidaamka shirkadda caalamiga ah ee caanka ah. Waa mid horumarsan oo la isku halleyn karo.
Mashruuca nidaamka saadka caqliga leh - wuxuu adeegsadaa xakamaynta lambarrada iyo teknolojiyada kaarka casriga ah si loo wanaajiyo waxtarka gaarsiinta xirmooyinka badan iyo yareynta qaladka aadanaha.
3.Kiln iyo mashruuca nidaamka dhoofinta foornada - wuxuu adeegsadaa shabakada neerfaha, aqoonsiga moodeelka iyo tikniyoolajiyadda dareeraha jilicsan, qaab isku dhafan algorithm xakamaynta algorithm si loogu badalo hawlgalka macmalka ah, xaqiijinta xakamaynta otomaatiga ah iyo gaarista yoolalka tayada xasilloon, tirada deggan, keydinta dhuxusha, keydinta korantada iyo kartida wax soosaarka oo soo hagaageysa had iyo jeer xaalada hawlgalka foornada.
Mashruuca nidaamka maareynta tamarta- wuxuu ururiyaa, falanqeeyaa, kormeeraa oo maamulaa macluumaadka dhexdhexaadka tamarta iyadoo la dejinayo nidaamka maareynta tamarta si loo gaaro himilooyinka keydinta tamarta iyo yareynta qiiqa.
5.Machinesku wuxuu beddelaa dadka ku jira jagooyinka muhiimka ah - waxay u qaataan warshad caqli badan sida jihada ujeeddada, u adeegso aalado shaqooyinka halista sare leh. Hadda 5 mashruucyo R&D ah ayaa la xaqiijiyay in la baaray.
Ep Ku bedel rakibaadda gacanta ee robot nooca kiishka ah
Ku beddel bacda macmalka ah bakeeriga otomaatigga ah
Robotka nadiifinta "Snowman" ee qaboojiyaha shabaggeedii
Ku beddel qalliinka macmalka ah nadiifinta aaladda kululeynta iyo robot garaaca maqaarka
Ku beddel nadiifinta bakhaarka macmalka ah robot nadiifinta
Qalabka iyo Qaybaha Dayactirka
Warshad taagan (ceeriin toosan oo ceeriin ah, sibidh toosan, dhagax toosan oo saliid ah), foornada wareega, meeldhexaadka waxsoosaarka waxsoosaarka sare iyo rullaluistemadka iwm kuwa ay ikhtiraacday shirkadda iibinaysa kooxdu waxay dabooli karaan baahida 2500-10000tpd ee khadadka wax soo saarka sibidhka cusub. .
Iskaashi la leh Jarmalka Siemens Company iyo Zhejiang Central Control Co., Ltd, shirkaddu waxay soo saartay oo ay soo saartay nidaam farsamo oo farsamo toos ah u hogaaminaya warshadaha farsamada, nidaamka ogaanshaha khabiirka ee foornada wareega, nidaamka tababbarka ee OTS iyo dhisida nidaamka keydinta tamarta.
Shirkaddu waxay qaadataa heerka ugu sarreeya ee mashiinnada la soo dhoofiyo si ay u soo saaraan xirashada u adkaysta, kuleylka u adkaysta iyo daxalka u adkeysanaya daxalka, kaas oo dabooli kara baahida 2500-10000tpd ee khadadka wax soo saarka sibidhka cusub ee habka qalalan.
Waxay iskaashi la sameeyeen CN Gpower Gearbox Co., Ltd iyo NGC group, shirkaddu waxay aasaastay xarunta dayactirka qalabka gearbox si ay u siiso xalka xirfad hagaajinta qalabka dayactirka ee shirkadaha warshadaha.
"Win-win" waa hadafka xubnaheenna JIDONG. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa wada shaqeyntaada!